Rohingya Students Forum: May 2017
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ မြို့များတွင်နေထိုင်သော မွတ်စလင်တို့၏ ဥပုသ်စောင့်ချိန်များ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဥပုသ်လဖြစ်တဲ့ ရမ်ဇန်လမှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မွတ်စလင်တွေဟာ လပြက္ခဒိန်အတိုင်း ဥပုသ်စောင့်ထိန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေမထွက်ခင်အချိန်အစောပိုင်းကတည်းကနေ နေ၀င်ချိန်ထိအောင် အစားအသောက်လုံးဝရှောင်ကျဉ်ပြီး ဥပုသ်စောင့်ထိန်းကြမှာပါ။
လပြက္ခဒိန်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်လို့ မကြာသေးခင်နှစ်တွေက စပြီး ရမ်ဇန်လဟာ နွေရာသီပိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ နွေဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကမ္ဘာမြောက်ဘက်ခြမ်းမှာ နေ့တာရှည်ပြီး နိုင်ငံတော်တော်များမှာ ပူပြင်းတဲ့အပူချိန်ကို ခံစားရမှာပါ။ ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ ရမ်ဇန်နေ့ရက်တွေဟာ အတိုဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ရမ်ဇန်လမှာ ဥပုသ်စောင့်ရတဲ့အချိန်ကာလဟာ ၁၁ နာရီကနေ ၂၂ နာရီကြားမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလမှာတော့ ချီလီနိုင်ငံမှာ ၁၀ နာရီကနေ ဂရင်းလန်းမှာ ၂၁ နာရီထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။
နေ၀င်နေထွက်ချိန်က နေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတာကြောင့် တစ်လလုံးမှာ ဥပုသ်စောင့်ချိန်ဟာလည်း တောက်လျှောက်ဆိုသလို မိနစ်အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနေမှာပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ မြို့တချို့ကတော့ ဥပုသ်ကို နာရီအကြာဆုံး စောင့်ထိန်းရမယ့် မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပုသ်စောင့်ချိန်ဟာ နေ့ရက်သာမက တွက်ချက်တဲ့ နည်းစနစ်တွေအရပါ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။
1. Nuuk မြို့၊ ဂရင်းလန်းကျွန်း - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၂၁ နာရီ (မနက် ၂း၁၆ မှ ည ၁၁း၁၄ ထိ)
2. အော်စလိုမြို့၊ နော်ဝေးနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၂၀ နာရီ (မနက် ၂း၂၄ မှ ည ၁၀း၁၅ ထိ)
3. ဟယ်လင်စကီးမြို့၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၂၀ နာရီ (မနက် ၂း၂၆ မှ ည ၁၀း၂၄ ထိ)
4. စတော့ဟုမ်းမြို့၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၉.၅ နာရီ (မနက် ၁း၅၇ မှ ည ၉း၃၉ ထိ)
5. မော်စကိုမြို့၊ ရုရှားနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၉ နာရီ (မနက် ၁း၄၉ မှ ည ၉း၃၆ ထိ)
6. ကိုပင်ဟေဂန်မြို့၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၉ နာရီ (မနက် ၂း၂၉ မှ ည ၉း၃၆ ထိ)
7. ဘာလင်မြို့၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၉ နာရီ (မနက် ၂း၄၁ မှ ည ၉း၃၄ ထိ)
8. Calgary မြို့၊ ကနေဒါနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၈.၅ နာရီ (မနက် ၃း၀၅ မှ ည ၉း၃၉ ထိ)
9. ၀ါဆောမြို့၊ ပိုလန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၈.၅ နာရီ (မနက် ၂း၀၃ မှ ည ၈း၄၂ ထိ)
10. လန်ဒန်မြို့၊ ယူကေနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၈.၅ နာရီ (မနက် ၂း၂၉ မှ ည ၉း၀၃ ထိ)
11. အက်စ်တာနားမြို့၊ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၈.၅ နာရီ (မနက် ၂း၄၃ မှ ည ၉း၁၅ ထိ)
12. ဘရပ်ဆဲလ်မြို့၊ ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၈.၅ နာရီ (မနက် ၃း၂၁ မှ ည ၉း၄၁ ထိ)
13. ဇူးရစ်မြို့၊ ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၈ နာရီ (မနက် ၂း၅၈ မှ ည ၉း၁၀ ထိ)
14. ပဲရစ်မြို့၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၈ နာရီ (မနက် ၃း၂၄ မှ ည ၉း၄၁ ထိ)
15. ဘူခါရက်စ်မြို့၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၇.၅ နာရီ (မနက် ၃း၁၉ မှ ည ၈း၅၀ ထိ)
16. ရောမမြို့၊ အီတလီနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၇ နာရီ (မနက် ၃း၃၆ မှ ည ၈း၃၅ ထိ)
17. မက်ဒရစ်မြို့၊ စပိန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆.၅ နာရီ (မနက် ၄း၅၁ မှ ည ၉း၃၆ ထိ)
18. လစ္စဘွန်းမြို့၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆.၅ နာရီ (မနက် ၄း၂၂ မှ ည ၈း၅၃ ထိ)
19. အေသင်မြို့၊ ဂရိနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆.၅ နာရီ (မနက် ၄း၁၅ မှ ည ၈း၄၀ ထိ)
20. ပေကျင်းမြို့၊ တရုတ်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆.၅ နာရီ (မနက် ၂း၅၅ မှ ည ၇း၃၃ ထိ)
21. နယူးယောက်မြို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆.၅ နာရီ (မနက် ၃း၅၄ မှ ည ၈း၁၇ ထိ)
22. ပြုံယမ်းမြို့၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆.၅ နာရီ (မနက် ၂း၅၁ မှ ည ၇း၂၄ ထိ)
23. အန်ကာရာမြို့၊ တူရကီနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆.၅ နာရီ (မနက် ၃း၂၇ မှ ည ၈း၀၉ ထိ)
24. တိုကျိုမြို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၂း၄၄ မှ ည ၆း၄၉ ထိ)
25. ကာဘူးလ်မြို့၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၃း၀၂ မှ ည ၆း၅၈ ထိ)
26. ရာဘတ်မြို့၊ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၃း၃၈ မှ ည ၇း၃၁ ထိ)
27. အစ္စလာမ္မာဘတ်မြို့၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၃း၂၀ မှ ည ၇း၁၁ ထိ)
28. တီဟီရန်မြို့၊ အီရန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၄း၀၆ မှ ည ၈း၁၃ ထိ)
29. ဘဂ္ဂဒက်မြို့၊ အီရတ်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၃း၁၆ မှ ည ၇း၀၅ ထိ)
30. ဘေရွတ်မြို့၊ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၃း၄၉ မှ ည ၇း၄၂ ထိ)
31. အလက်ပိုမြို့၊ ဆီရီးယားနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၆ နာရီ (မနက် ၃း၃၁ မှ ည ၇း၄၁ ထိ)
32. ကိုင်ရိုမြို့၊ အီဂျစ်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅.၅ နာရီ (မနက် ၃း၁၃ မှ ည ၆း၄၉ ထိ)
33. ဂျေရုစလင်မြို့၊ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅.၅ နာရီ၊ (မနက် ၃း၅၉ မှ ည ၇း၃၈ ထိ)
34. ကူဝိတ်စီးတီးမြို့၊ ကူဝိတ်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅.၅ နာရီ (မနက် ၃း၁၇ မှ ည ၆း၄၂ ထိ)
35. ဂါဇာမြို့၊ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅.၅ နာရီ (မနက် ၄း၀၃ မိနစ်မှ ည ၇း၄၀ ထိ)
36. နယူးဒေလီမြို့၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅ နာရီ (မနက် ၃း၅၄ မှ ည ၇း၁၂ ထိ)
37. Kowloon မြို့၊ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅ နာရီ (မနက် ၄း၁၆ မှ ည ၇း၀၁ ထိ)
38. ဒက္ကာမြို့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅ နာရီ (မနက် ၃း၄၇ မှ ည ၆း၄၀ ထိ)
39. မွတ်စကတ်မြို့၊ အိုမန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅ နာရီ (မနက် ၃း၅၂ မှ ည ၆း၄၇ ထိ)
40. ရီယာဒ်မြို့၊ ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅ နာရီ (မနက် ၃း၃၆ မှ ည ၆း၃၆)
41. ဒိုဟာမြို့၊ ကာတာနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅ နာရီ (မနက် ၃း၁၅ မှ ည ၆း၁၈ ထိ)
42. ဒူဘိုင်းမြို့၊ ယူအေအီးနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၅ နာရီ (မနက် ၄း၀၂ မှ ည ၇း၀၄ ထိ)
43. Khartoum မြို့၊ ဆူဒန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၄.၅ နာရီ (မနက် ၄း၅၂ မှ ည ၇း၁၆ ထိ)
44. အေဒင်မြို့၊ ယီမင်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၄ နာရီ (မနက် ၄း၁၃ မှ ည ၆း၂၂ ထိ)
45. Dessye မြို့၊ အီသီယိုးပီးယား - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၄ နာရီ (မနက် ၄း၃၅ မှ ည ၆း၂၈ ထိ)
46. ကိုလံဘိုမြို့၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၄ နာရီ (မနက် ၄း၃၈ မှ ၆း၂၃ မိနစ်)
47. ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၄ နာရီ (မနက် ၄း၃၂ မှ ည ၆း၄၂ ထိ)
48. ကွာလာလမ်ပူမြို့၊ မလေးရှားနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၃.၅ နာရီ (မနက် ၅း၃၉ မှ ည ၇း၁၉ ထိ)
49. Novena မြို့၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၃.၅ နာရီ (မနက် ၅း၄၃ မှ ည ၇း၀၈ ထိ)
50. လူအန်ဒါမြို့၊ အန်ဂိုလာနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၃ နာရီ (မနက် ၅း၀၁ မှ ည ၅း၅၄ ထိ)
51. ဆော်ပေါ်လိုမြို့၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၃ နာရီ (မနက် ၄း၁၉ မှ ည ၅း၁၁ ထိ)
52. ဂျာကာတာမြို့၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၃ နာရီ (မနက် ၄း၃၄ မှ ည ၅း၄၄ ထိ)
53. နိုင်ရိုဘီမြို့၊ ကင်ညာနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၃ နာရီ (မနက် ၅း၁၅ မှ ည ၆း၃၂ ထိ)
54. Harare မြို့၊ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၂.၅ နာရီ (မနက် ၅း၀၂ မှ ၅း၂၈ ထိ)
55. ပရီတိုးရီးယားမြို့၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၂ နာရီ (မနက် ၅း၂၃ မှ ည ၅း၂၆ ထိ)
56. အော့ကလန်မြို့၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၁.၅ ကြိမ် (မနက် ၅း၅၂ မှ ည ၅း၁၄ ထိ)
57. မန်ဒိုဇာမြို့၊ အာဂျင်တီးယားနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၁.၅ နာရီ (မနက် ၇း၀၁ မှ ည ၆း၃၈ ထိ)
58. ကိပ်တောင်းမြို့၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၁.၅ နာရီ (မနက် ၆း၂၁ မှ ၅း၄၇ ထိ)
59. ကန်ဘာရာမြို့၊ သြစတေးလျနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၁.၅ နာရီ (မနက် ၅း၃၁ မှ ၅း၀၂ ထိ)
60. -Punta Arenasမြို့၊ ချီလီနိုင်ငံ - ဥပုသ်စောင့်ချိန် ၁၀ နာရီ (မနက် ၆း၃၄ မှ ည ၄း၄၁ ထိ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပုသ်လ စတင်ကျရောက်တဲ့ မေလ ၂၈ ရက် အချိန်ဇယားအရ စဟ်ရီပိတ် (၀ါချီချိန်) က ၄း၀၉ နာရီနဲ့ အိဖ်သာရီ (၀ါဖြေချိန်) က ၆း၃၆ နာရီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပုသ်စောင့်ချိန်ကတော့ ၁၄.၄၁ နာရီဖြစ်ပါတယ်။
ဉာဏ်အလင်းမဂ္ဂဇင်း အတွဲ(၁) အမှတ်(၆) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Link တစ်ခုကနေ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါပြီ။
Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7
Website - http://wp.me/p5pNNN-nZ
Labels: aljazeera, ဘာသာရေး, သုတ
Dr. Kamal Okuda foughtalong academy life searching of religions, until he reached to Islam. He explained his life before Islam: “Before Islam my life was barbaric.. Very barbaric! Ignorant..I didn’t know the truth!”
Posted by Rohang king at 6:36 AM
Labels: English, well-known, ပညာရေး, ဘာသာရေး, နိုင်ငံတကာ
15-yr-Old Author Donate All sale Money of Her book for Education
Pune: A 15 year old school student, Mehek Puntambekar from Singapore has authoredacompilation of stories, ‘Dancing in the Rain' (Ten stories -One ideas).
“Mehek announced that the money earned through the sale of the book will be donated to Vanarai to spend on the education of rural children.”
The book has been published Vanrai and released by Lila Poonawala,aveteran industrialist and Chairperson of the Lila Poonawala Foundation, at the Eco Hall of Vanrai.
Veteran socialist leader Bhai Vaidya presided over the function.
Ravindra Dharia, Chairman of Vanarai and Rohidas More, Trustee of Vanarai, were also present.
The book is about people that have influenced the author in her life.
Mehek announced that the money earned through the sale of the book will be donated to Vanarai to spend on the education of rural children.
Photo: Socialist leader Bhai Vaidya (center), Lila Poonawala (second from right),
release. ‘Dancing in the Rain’ by Mehek Puntambekar (extreme right).
Labels: books, English, well-known
A Mustached Bhodisattava Statue was found in Taxila
ISLAMABAD: After 14 years, the Islamabad Museum has added another attraction to its permanent connection from the 2nd to 4th centuries, the statue of Bodhisattva.
Sculpted from schist stone, the statue ofamoustached Bodhisattva withahalo stands around 36 inches tall and 22 inches wide,alittle above knee height. It was handed over to the Department of Archaeology and Museums from the Ministry of National Heritage.
According to the archaeology department, statues of Bodhisattva of this size are found in the Swat Valley, Peshawar and Taxila.
Such statues are typically found in Swat Valley, Peshawar, Taxila
In this depiction, Bodhisattva wearsahigh turban withacentral globular bead andafan-shaped crest.
The statue’s earlobes are slightly damaged, and it has deep set half open eyes,aflat nose andarounded chin.
A band with two strands runs around its neck featuringazigzag pattern, as well asanecklace withathick chain andastone held between the jaws of two dragon-like creatures. An amulet has been sculpted onto the right shoulder, and Bodhisattva appears inameditative posture with legs crossed, holdingalotus flower in his left hand.
The museum’s deputy director, Ghafoor Lone, explained that Bodhisattva isapopular subject of Buddhist art.
“The statue is an impression of one of 24,000 Bodhisattvas that had come and gone in this world. Bodhisattva isastep below the final stage, beforeapractitioner of Buddhism attains Buddha-hood.”
Mr Lone explained that it was common for Buddhists to remain in the Bodhisattva stage to serve others and take them along. He said that in early Indian Buddhism, the term Bodhisattva was used primarily to refer to Gautama Buddha in his former life.
The Jataka tales, stories of the Buddha’s lives, depict the various attempts of the Bodhisattva to embrace qualities such as self-sacrifice and morality.
The Islamabad museum is already home to three stone Bodhisattva sculptures, all of which belong to the Gandhara region. These rare artefacts were confiscated by customs authorities when smuggled attempted to leave the country with them from the Peshawar and Islamabad airports.
The official said the sculpture will be displayed publicly soon.
Posted by Rohang king at 9:51 AM
Labels: English, ဘာသာရေး, နိုင်ငံတကာ
သမ္မတ ဦးကျော်ထင်ကို တစ်ချိန်က ထောင်ပို့ခဲ့သော ဦးဆန်းဆင့်
မေလ ၂၄ ရက် နံနက် ၈နာရီကျော်တွင် တောင်ငူ အကျဉ်းထောင်၏ ခြံစည်းရိုးတံခါးပေါက်ရှေ့၌ သစ်လွင်သော အသားရောင် ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်ကို ပိုးပုဆိုးအစိမ်း နုရောင်ဖြင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထား သူတစ်ဦးသည် လာရောက်ကြိုဆို သူများနှင့် လိုက်ပါမသွားမီ စောင့်ကြိုနေသော ကင်မရာများ၊ အသံဖမ်းစက်များနှင့် ဦးစွာ ရင်ဆိုင် လိုက်ရသည်။
‘‘အခုလို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတကြီး ဦးထင် ကျော်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်း အောင်လှိုင်တို့ကို အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်’’ဟု အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် က လွတ်မြောက်လာပြီးစတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်း တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည့် ဦးဆန်းဆင့်၏ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ် မြောက်လာခါစမြင်ကွင်းမှာ သံဝေဂရဖွယ်ရာ အတိလွှမ်းခြုံထားသည်။ ယခင်ထက် ညိုမောင်းသွားသော အသားအရေ၊ အနည်းငယ် ပိန်သွယ်သွားသည့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မျက်နှာပြင်တစ်ဝိုက် ပိုမိုသိသာ ထင်ရှားလာသော ဇရာ၏ အရိပ်ယောင်များက အကျဉ်းထောင် အတွင်း သုံးနှစ်ခန့် နေထိုင်ခဲ့ရသည့် ၎င်း၏ ဘဝဖြတ်သန်းမှုကို ထင်ဟပ်နေသည်။
တပ်မတော်တွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သော ဦးဆန်းဆင့်သည် ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒုတိုင်းမှူး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် စစ်ဒေသမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး
စစ်ဒေသမှူး အဖြစ် တာဝန်ယူထားစဉ် ယနေ့ သူ့ကို အကျဉ်း ထောင်အတွင်းမှ ထုတ်ပေးခဲ့သော သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ ဦးဆန်းဆင့်သည် ၎င်း အာဏာ လက်ဝယ်ရှိစဉ်က သမ္မတဦးထင်ကျော်ကို ဖမ်းဆီးကာ အင်းစိန် ထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးထင်ကျော် သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တစ် ခုအတွင်း ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၌ဖမ်း ဆီးခံရပြီး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် တွင် လအနည်းငယ်ကြာ ထိန်း သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
‘‘အဲဒီတုန်းက သူ (ဦးဆန်း ဆင့်)က စစ်ဒေသမှူးပေါ့။ ကျွန် တော်တို့က ထောင်ထဲမှာပဲရှိသေး တယ်။ သူက ဦးဆောင်ပြီး သမ္မတ ကြီး (ဦးထင်ကျော်)ကို ဖမ်းတာ။ အခုလို သူလွတ်မြောက်လာတဲ့အ ပေါ်မှာ ဒါဟာ အစိုးရသစ်ရဲ့ မူဝါ ဒကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။ အစိုးရ သစ်ရဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး နဲ့ သင်ပုန်းချေရေးအတွက် သမ္မတကြီးအပါအဝင် အစိုးရသစ်က စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ သွားနေတဲ့ ပြယုဂ်ပဲ’’ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားဟောင်းနှင့် အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘိုဘိုဦးက ပြောသည်။
ယနေ့ သမ္မတဦးထင်ကျော် က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ဦးဆန်း ဆင့်အပါအဝင် အကျဉ်းသား ၂၅၉ ဦးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၄ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ၎င်း၏ အခွင့်အာဏာဖြင့် ပြစ် ဒဏ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရ ချိန်တွင်တစ်ချိန်က ရန်သူသဖွယ် ဆက်ဆံခြင်းခံခဲ့ရသူကို လှပစွာ တုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဦးဆန်းဆင့်ကို နိုင်ငံတော် ပိုင်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော် အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်သည်ဆိုကာ ရာဇဝတ်မကင်းသည့် ယုံကြည် အပ်နှံဖောက်ဖျက်မှု ပုဒ်မ ၄၀၉ ဖြင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်၊ အစည်း အဝေးတစ်ခုအတွင်း နိုင်ငံတော် အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေ သည့် အသုံးအနှုန်းများ ပြောဆိုခဲ့ သည်ဆိုကာ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က)အရ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ ကျပ်တစ်သိန်းတို့ကို ချမှတ်ခဲ့ သည်။ စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘ကျွန်တော့်ကို ထောင်ချ လိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လည်း ဘယ်လိုအာဃာတမျိုးမှ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တရားအားထုတ်ခွင့်တွေ ရခဲ့တယ်။ လောကုတ္တရာအရေးတွေ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်က ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမဆို ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံတွေနဲ့ အမှားအယွင်းများ ရှိခဲ့ရင်လည်း အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်’’ဟု ဦးဆန်းဆင့်က ၎င်းအား ထောင်ချခဲ့သည့် ယခင်အစိုးရဟောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပြုပြောသည်။
ဦးဆန်းဆင့်သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တင်မြှောက်ခံရပြီး ယင်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်း အောင် ဦးဆောင်သည့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အဆင်မပြေမှုများ မကြာခဏဖြစ် ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၃ ဖေဖော် ဝါရီတွင် သာသနာရေးဝန်ကြီးအ ဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသည်။
၎င်း၏ သာသနာရေးဝန်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းအပေါ် ဧရာ ဝတီတိုင်းဒေသခံများက ကန့် ကွက်ခဲ့ပြီး တိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သာ ဆက်လက်ထမ်း ဆောင်ကြစေလိုကြောင်း ကျုံ ပျော်နှင့် ပန်းတနော် ဒေသခံများက ဆန္ဒပြခဲ့ကြ၍ ပြည်သူ့ထောက် ခံမှုကို ရှားရှားပါးပါးရရှိခဲ့သော ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း တစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဘဝဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရ သည့် ပုဒ်မများကို ရုပ်သိမ်းပေးရန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၅၀ ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုး၍ သမ္မတထံ ပေးပို့တောင်းဆိုခံခဲ့ရ သူလည်းဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးထင်ကျော်က ၎င်း ၏ အခွင့်အာဏာထဲမှ ဦးဆန်းဆင့်ကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ယခင်အစိုးရလက် ထက်တွင်မူ ဦးဆန်းဆင့်သည် သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက် အမိန့် များကို မလိုက်နာခြင်း၊ အချို့ကိစ္စ ရပ်များတွင် သမ္မတကို ကျော်လွန် လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ရှိခဲ့ခြင်း ကြောင့် အရေးယူခံခဲ့ရကြောင်း ထိုစဉ်က သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၎င်းထံတွင် ယခင်အစိုးရတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေ အထောက်အထားများစွာ ရှိသည်ဟုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော ဦးဆန်းဆင့်သည် နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရရုံသာမက သရေစည်သူဘွဲ့ကိုပင် ပြန်လည်ရုပ် သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ယခုလွတ်မြောက်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝမ်းသာသော်လည်း အပြည့်အစုံ ဝမ်းမသာနိုင်သေး ကြောင်းနှင့် အားလုံးလွတ်မြောက် စေလိုကြောင်း ဦးဆန်းဆင့်က ပြောသည်။
‘‘ဝမ်းတော့ သာပါတယ်။ အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ ဝမ်း မသာနိုင်သေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခုထောင်ထဲမှာ ကျန် နေသေးတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ အ များကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ သူတို့ ကိုပါ လွတ်စေချင်ပါတယ်’’
Posted by Rohang king at 2:30 AM
Labels: politic, ပြည်တွင်း
ရိုစာရေးအက္ခရာဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားသော ‘ပညာ၏ ဂုဏ် နှင့် အရေးပါပုံ’ စာအုပ်ငယ်
ရေးသား📑 မုဖ်သီ အဗ္ဗဒူဆာလာမ်
ရိုပြန် 📑 ဟာလေဒ်
Labels: books, literature, poem, Rohingyalish
Atomic Size (အက်တမ် အရွယ်အစား)
Atom တစ်လုံးရဲ့ size(အရွယ်အစား) ကို ၎င်းAtomရဲ့ radius(အချင်းဝက်)နဲ့ ကိုယ်စားပြု တင်ပြတယ်။
radius ကြီးရင် size ကြီးပြီး၊
radius သေးရင် size သေးတယ်။
Atomic radius => Atomic size
Atom တစ်လုံးရဲ့ size (Atomic size) အပေါ် အဓိက လွှမ်းမိုးတဲ့ အချက် ၂ချက် ရှိတယ်။
၁) Nucleus ရဲ့ ဆွဲအား
၂) Electron အချင်းချင်းရဲ့ တွန်းအား
Nucleus ရဲ့ ဆွဲအားက Electron အချင်းချင်းတွန်းအားထက် များနေရင်
Nucleus ဆွဲအားက ပိုကောင်းရင်
Nucleus က Electron တွေကို တင်းကြပ်စွာ စည်းနှောင် ဆွဲငင်တဲ့ အတွက်...
➳ Electron တွေဟာ Nucleus နဲ့ ပိုနီးလာတယ်၊
➳ Electron လှည့်ပတ်ရာ ပတ်လမ်း/လမ်းကြောင်း (shell) တွေဟာ အလယ်ကို စုလာတယ်၊
➳ Atom တို့ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ
Size ဟာ သေးသွားတယ်။
Nucleus ဆွဲအားထက် Electron အချင်းချင်းရဲ့ တွန်းအားကသာ ပိုများနေခဲ့ရင်
မျိုးတူ Electron အချင်းချင်း တွန်းကန်ကြတဲ့အတွက်
➳ Electron တွေဟာ Nucleus နဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးလာမယ်၊
➳ Electron လှည့်ပတ်ရာ ပတ်လမ်း(shell) တွေဟာ အပြင်ကို ကားလာမယ်
➳ Atom တွေရဲ့ အရွယ်အစားဟာ expand ပွပြီး၊
Size ဟာ ကြီးလာမယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ Nucleus ရဲ့ဆွဲအားနဲ့ ပြောရမလဲ?
ဘယ်အချိန်မှာ Electron အချင်းချင်း တွန်းအားနဲ့ ပြောရမလဲ?
*** တူညီသော Period(အတန်း) တစ်ခုထဲတွင် ရှိရင်၊ Electron shell no.(ပတ်လမ်းအရေအတွက်) ချင်း တူတယ်...
Period 2ထဲက ကြိုက်ရာ Atom ရေး...သူတို့မှာ Shell2shell ရှိတယ် ...
Period3ထဲက မည်သည့် Atom မဆို သူ့တို့မှာ Shell3shell ရှိတယ်
(Period ကိုကြည့်ရင် Shell no. ကို သိတယ်)
အဲဒီလို Shell အရေအတွက်ချင်း တူရင်
Nucleus က Electron တွေကို ဆွဲရတဲ့ အကွာအဝေးတူတဲ့ အတွက်....
➳ ➳ ➳ Nucleus ရဲ့ ဆွဲအားက အဓိက ကျတယ်
(အဲဒီအချိန်မှာ Electron အချင်းချင်း တွန်းအားက မပြောပလောက်ဘူး Negligible)
Period တူရင် Shell အရေအတွက်တူတယ်၊
Shell အရေအတွက် တူရင် Nucleus က ဆွဲရတဲ့ အကွာအဝေး တူတယ်၊
ဆွဲရတဲ့ အကွာအဝေးတူရင် ဆွဲအားနဲ့ပဲ နှိုင်းယှဉ်ရတယ်
Same period ထဲမှာ
Left to Right သွားရင်
* Atom တွေရဲ့ Atomic no. ကြီးလာတယ်
* Nucleus အတွင်းရှိ Proton အရေအတွက် များလာတယ်
* Nuclear charge အားပိုကောင်းလာတယ်
ပိုအားကောင်းလာတဲ့ Nucleus ဟာ Electron တွေကို ပိုပိုဆွဲတဲ့အတွက်
Electron တွေဟာ Nucleus နဲ့ ပိုနီးလာပြီး၊ Shell တွေဟာ ပိုပိုကျုံ့လာပြီး၊Size တွေဟာ သေးသွားတယ်..
(Left to Right ➳ Small size)
Shell no. မတူတော့တဲ့အတွက်
Nucleus က ဆွဲရတဲ့ အကွာအဝေး မတူတော့ဘူး..
အဲဒီလို ဆွဲရတဲ့ အကွာအဝေး မတူရင် ဆွဲအားနဲ့ မပြောရဘူး
(Nucleus ရဲ့ ဆွဲအားက အဓိက မကျဘူး)
Electron အချင်းချင်း တွန်းအားနဲ့ပဲ နှိုင်းယှဉ်ရတယ်...။
Same group အတွင်း
Top to Bottom သွားရင်..
Atomic no. တွေကြီးလာတာ မှန်ပေမဲ့၊
Proton အရေအတွက်တွေ များလာတာ မှန်ပေမဲ့၊
Nuclear charge တွေ ကောင်းလာတာ မှန်ပေမဲ့...
Shell အရေအတွက်ချင်း မတူတော့တဲ့ အတွက်၊
ဆွဲရတဲ့ အကွာအဝေး(လက်တံ) မတူတော့တဲ့အတွက်..
(Nucleus ရဲ့ ဆွဲအားက အဓိက မကျတော့ဘူး)
Electron အချင်းချင်း တွန်းအားနဲ့သာ နှိုင်းယှဉ်ရတယ်
တူညီသော Group အတွင်း
အပေါ်မှ အောက်သို့ သွားရင်
➳ Shell အရေအတွက် ပိုများလာမယ်
➳ Electron အရေအတွက် ပိုပိုများလာမယ်
➳ ပိုများလာတဲ့ Electron တွေဟာ မျိုးတူကြတဲ့အတွက် အချင်းချင်း တွန်းကန်ကြပြီး၊
Electron တွေဟာ Nucleus နဲ့ ပိုဝေးလာတယ်၊
Shell တွေဟာ အပြင်ကို တဖြည်းဖြည်း ကားလာပြီး၊
Atom တွေရဲ့ အရွယ်အစား (Atomic size) ဟာ ကြီးလာတယ်
***(အပေါ်ကအောက်သွား Size ကြီးသွား)
Posted by Rohang king at 5:06 AM
Labels: science, ပညာရေး
တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှ ငါးတန်းကျောင်းသားလေးကို Cyber Ninja လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ အငယ်ဆုံး ရှောင်လင်ကွန်ဖူ ခါးပတ်နက်ပညာရှင်လည်း ဖြစ်တဲ့ ဒီကလေးဟာ တစ်နေ့ မှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးကွန်ဖရင့် ကျင်းပနေစဉ် ကမ္ဘာ့ပညာရှင် ရာပေါင်းများစွာကို အံ့ဩ သင့်စေမယ့် ကိစ္စတစ်ခုကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရူဘန်ပေါလ်လို့ ခေါ်တဲ့ ကလေးငယ်ဟာ နယ်သာလန်ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးကွန်ဖရင့်ကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဆိုင်ဘာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရဲ့ စမတ်ဖုန်းများကို Teddy Bear လို့ ခေါ်တဲ့ စမတ်ဝက်ဝံရုပ်လေးသုံးပြီး ဟက်ခ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပေါလ်ဟာ ဘလူးတုချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ကလေးကစားစရာ စမတ်ရုပ်လေးတွေကို လက်နက်လို သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သက်သေပြချင်လို့ ယခုလို သရုပ်ပြပေးခဲ့တာပါ။
“လေယာဉ်ပျံကနေ ကားတွေအထိ ၊ စမတ်ဖုန်းတွေကနေ စမတ်အိမ်တွေ အထိ နောက်ဆုံး ကစားစရာ အရုပ်ကလေးတွေအထိ IoT လို့ ခေါ်တဲ့ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ” လို့သည်ဟိဂ်မြို့ မှာ ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖိုရမ်ရဲ့ စင်မြင့်ထက်မှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “Terminators တွေကနေ Teddy Bears တွေ အထိ ဘယ်လိုကစားစရာမဆို လက်နက်တစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်တယ်” လို့ လည်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ယခုသရုပ်ပြချိန်မှာ ပေါလ်ဟာ သူ့ ရဲ့ စမတ်ဝက်ဝံရုပ်ကလေးကနေ Wifi နဲ့ Bluetooth စမတ်နည်း ပညာကနေ iCloud နဲ့ ချိတ်ပြီး လုံခြုံရေးချိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အတွက် ပေါလ်ဟာ သူ့ ရဲ့ လက်ပ်တော့မှာ Raspeberry Pi ကို ပလပ်ထိုးချိတ်ဆက်ပြီး အခန်းထဲမှာ ရှိသမျှ ဘလူးတုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အကုန်လုံးကို စကင်ဖတ်လိုက်ပြီး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာပါတဲ့ အိုင်ဒီ နံပါတ်တွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသွားပါတယ်။ ။ ပြီးတာနဲ့ Python လို Programming Languag ကို သုံးပြီး အရုပ်ကလေးကနေတစ်ဆင့် နံပါတ်တစ်ခုခုကို ဖွင့်ပြီး ပရိတ်သတ်ထဲက မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကို Record ဖမ်းသွားတာပါ။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုကို ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ ပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် အံ့အားသင့် သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပေါလ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူ မာနိုပေါလ်ဟာ သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရူဘန်အသက် ခြောက်နှစ်သားကတည်းက IT Skills ပိုင်းကို ညွှန်ကြားသင်ပြပေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရူဘန်ဟာ အိုင်တီပညာပိုင်းသာ ကျွမ်းကျင်ရုံသာမက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ရှောင်လင် ကွန်ဖူး ခါးပတ်နက်ပညာရှင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပြီး Cyber Shaolin ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ NGO အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုလည်း တည်ထောင်ထားပါတယ်။
Posted by Rohang king at 5:04 AM
Labels: well-known, နည်းပညာ, ပညာရေး, နိုင်ငံတကာ
Solat táko kucicór Garí [လုံ့လယာဉ်ကြီး မောင်းအစဉ်]